Ummandla waseGalili - Imbali, iJografi, iNkolo
IlaseGalili (isiHebhere saseGrisi , esithetha ukuba "isangqa" okanye "isithili") yayingomnye wemimandla emikhulu yasePalestina yasendulo, inkulu kuneJude naseSamariya. Ingxelo yokuqala yeGalili evela kuFaro Tuthmose III, owathimba iidolophu eziliqela zaseKanan apho ngo-1468 BCE. IGalili ikhankanywe ngamanye amaninzi kwiTestamente Elidala ( uYoshuwa , iMikhosi, iiKumkani ).
Iphi i Galili?
IlaseGalili isenyakatho yePalestina, phakathi kweMlambo iLithani eLebhanon yanamhla kunye neNtaba yaseYizereli yakwaSirayeli namhlanje.
IlaseGalili iyahlula iindawo ezintathu: i-Galileya ephezulu kunye neemvula ezinzulu kunye neentsika eziphakamileyo, iGalili ephantsi kunye nezulu lezulu, kunye neLwandle laseGalili. Ummandla waseGalili waguqula izandla eziliqela ngeenkulungwane: IYiputa, iAsiriya, iKanan kunye namaSirayeli. Ngaphandle kwelakwaYuda kunye nePhereya , kwakungumlawuli kaHerode Omkhulu waseJudiya.
UYesu Wenzani EGalili?
IGalili yaziwa ngokuba yindawo apho, ngokutsho kweevangeli, uYesu wayeqhuba ubuninzi bakhe bobulungiseleli. Ababhali beendaba bathi ubutsha bakhe buchithe kwiGalili esezantsi ngoxa wayekhulile kunye nokushumayela kwenzeka ngeenxa zonke kumntla-ntshona-ntshona yoLwandle lwaseGalili. Iidolophu apho uYesu wayichitha khona ixesha elide (eKapernahum, eBhetsayida ) baseGalile.
Kutheni iGalili ibalulekile?
Ubungqina bemivubukulo bubonisa ukuba le mimandla yasemaphandleni yayinabantu abahlala kwiindawo zakudala, mhlawumbi ngenxa yokuba yayinomkhuhlane.
Le pateni yaqhubeka ngexesha lokuqala lamaGrike, kodwa litshintshile phantsi kwamaHasmonea aqalise inkqubo "yekoloni yangaphakathi" ukuze kuphinde ibuyiselwe ubukhosi bezobupolitika nezobupolitika eGalili.
Umlando-mlando ongumYuda uJosephus uthi iingingqi ezingaphezu kwe-200 zaseGalili ngo-66 CE, ngoko zihlala zihlala ngeli xesha.
Ukubonakaliswa ngakumbi kwiimpembelelo zangaphandle kunezinye iindawo zamaYuda, unomhedeni oqinileyo kunye noluntu lwamaYuda. IGalili yaziwa nangokuthi yiGalil ha-Goim , iNgingqi yeeNtlanga , ngenxa yabantu abaphakamileyo beeNtlanga kwaye ngenxa yokuba ummandla wawujikelezwe ngamacala amathathu ngabangaphandle.
Ubunikazi obukhethekileyo "baseGalili" buye lwaphuhliswa phantsi kweenkqubo zezopolitiko zaseRoma ezenza ukuba iGalili ithathwe njengendawo eyahlukileyo yolawulo, inqunyulwe ukusuka kwaYuda naseSamariya. Oku kwaphakanyiswa kukuba iGalili yayinjalo, ixesha elide, lilawulwa ngamapopu aseRoma kunokuba i-Rome ngokwalo ngqo. Oku kwavumela ukuba kubekho ukuzinza okukhulu kwezentlalo, kwakhona, ukuba kwakungekho isikhungo sezopolitiko ezichasene noRoman kwaye kwakungekho ummandla otyatyelweyo - ezininzi iingcamango eziphosakeleyo ezithatha kwiindaba ezilungileyo.
IlaseGalili yindawo apho ubuYuda buzuza khona ubuninzi befomu laso lanamhlanje. Emva kwesibini se-Jewish Revolt (132-135 CE) kwaye amaYuda axoshwa eYerusalem ngokupheleleyo, abaninzi banyanzelekile ukuba bathuthele emntla. Oku kwanda kakhulu abantu baseGalili kwaye, ngokugqithiseleyo, bathanda amaJuda ahlala kwezinye iindawo. Zomibini iMishnah kunye neTalmud yasePalestina zabhalwa apho, umzekelo. Namhlanje igcina inani elikhulu lamaSulumane ama-Arab kunye neDruze nangona liyinxalenye kaSirayeli.
Iidolophu ezinkulu zaseGalili ziquka uAkko (Acre), uNazaretha, uFeded, noTibheriya.
Iingxelo Zokuvuka kwiPasika
Iiminyaniso zeBhayibhile ukukhumbula nge-Fall
Iingxabano malunga nokuba iSikole soMthetho oPhezulu oPhezulu siThola kangakanani
Iintlobo zeengubo zaseRoma zokuBafazi
Indlela Yokuba IQinisekile Ngokufanelekileyo kwiVolleyball
IBauhaus, iNtaba yaseNtsundu kunye neNtsholongwane yoLwakhiwo lwangoku